Uvelile enkantolo ubaba osolwa ngokubulala amawele akhe | News24
Uvelile enkantolo ubaba osolwa ngokubulala amawele akhe
Cape Town - Owesilisa ongudokotela odabuka eSpain osolwa ngokubulala amawele akhe, ubebukeka ezothile ngesikhathi evele eNkantolo eNkulu yaseWestern Cape esigcawini esandulela icala ngoLwesihlanu.
Ummeli kaMario-César Deus Yela, u-Asghar Mia, uqinisekisile ukuthi uzakwabo uWilliam Booth, obemumele, ulinde ukuzwa kwindlu yenxusa laseSpain ngenqubekelaphambili futhi ubengakaxhumani kahle nekhasimende lakhe.
UYela usolwa ngokubulala izingane zakhe, o-Octavia noMaximo, emzini ohlala izivakashi eHout Bay, eKapa, ngo-Ephreli.
Lowo owayengunkosikazi wakhe uJulia Engelhorn wathola izidumbu zalezi zingane ezazineminyaka emithathu ubudala zisegumbini lokulala ngesikhathi uYela emumemele kulo muzi ukuba bazodla isidlo sasemini.
OLUNYE UDABA: Uzovela enkantolo osolwa ngokubulala amawele akhe
Kwathi uma efika lo wesifazane, uYela wamtshela ukuthi usebulele amawele abo.
Ingane yabo yesithathu yayisesikoileni ngaleso sikhathi.
UYela usolwa nangokusabisa ngokugwaza u-Engelhorn, okuthiwa wakwazi ukweqa wabaleka wabe esecela usizo konogada. Usolwa nangokweba imoto ka-Engelhorn yohlobo lweToyota Prado.
Kumanje ugqunywe esitokisini ngemuva kokuthi anqatshelwa ibheyili egcina ukuvela eNkantolo yeMantshi yaseWynberg.
Icala lihlehliselwe umhlaka-23 Febhuwari.